Xiisadda Khaliijka oo kala qaybisay dalal badan oo Afrika ah – Kasmo Newspaper
Xiisadda Khaliijka oo kala qaybisay dalal badan oo Afrika ah
Updated - June 16, 2017 2:56 pm GMT
London (Kasmo), Xiisaddii u dhexaysay dalalka Kahliijka waxay u gudubtay dalal si ad ah uga fog, masaafo ahaan iyo dhaqan ahaanba dalalka isku haya danaha gaarka ah ee ka dhexeeya.
Qadar waxay 14kii Juun kala soo baxday ciidankeedii xadka u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea, halkaas oo ay nabad-ilaalin u joogeen, ka dib shaqaaqooyinkii dhex maray dalalkaas 2010kii.
Tillaabadaasi waxay ka dambeysay ka dib markii 2da dal, Jabuuti iyo Eritrea, la safteen Sacuudiga iyo Imaraadka, qaybna ka noqdeen xasaradda ka dhex oogan iyaga iyo dalka yar ee Qadar. Labadaas oo qur ah ma aha, Senegal ayaa noqotay dalkii 1aad ee iska xaadiriya Riyadh, isaga oo safiirkiisii uga yeerta Dooxa, waxaana ku soo xigay Chad iyo Mauritania.
Markii dambana waxaa garab yaacay dalalka Gabon, Jasiiradaha Comoros iyo Mauritius iyo dalka Niger, kuwaas oo ku kala yaalla Badweynta India, Galbeedka iyo Bariga Afrika. Sida uu qoray wargayska “Jeune Afrique” ee arrimaha Qaaradda ku xeeldheer, giddigood dalalkaasi waa ama kuwo Muslim ah ama Islaamku ku badanyahay, dhaqaale ahaanna iska liita.
Kuwaas oo siyaabo kala gedisan ugu xirnaa taageerada maaliyadeed ee Sacuudiga, taas oo inta badan jeebka loogu shubo madaxda dalalka, halkii lagu maalgalin lahaa mashaariic horumarineed.
Laakiin dalal kale oo muslimiin ah ama u badan, sida Nigeria, Tunisia, Algeria iyo Sudan ayaa mowqif dhexdhexaad ah ka istaagay, gaar ahaan Marokko oo dhaqan ahaan ka duwan Sacuudiga waxay Qadar u dirtay gargaar cunto.
Arrinta ka aloosan Khaliijka waa shar cusub oo soo korortay oo boqortooyo carbeed oo hoosta ka collowday isku fiirsanayaan, kuwaas oo salka ku haya kacdoonkii “Gugii Carabta” ee sannadkii 2011kii soo bilowday, halisna galin doonta dheellitirka Bariga Dhexe.
Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya in ka badan rubuc Qarni dib u-dhac ah oo dagaallo sokeeye sababeen, kana mid ah dalalka lagu hardamayo waayadaan dambe, mowqifkeeda waa caddeysatay.
Kala qoqob iyo walaalo is ximinaya innaga ayay ina soo daashadeen, in kasta oo tabarteennu yartahayna waxaynu nahay qaran u madaxbannaan siyaasaddiisa dibadda, dhexdhexaadna ah.